ढल्दै छ मकवानपुर गढी - कोसेली - कान्तिपुर समाचार
पृथ्वीनारायण शाहले क्रिस्चियन पादरीलाई देश निकाले गरेको हुनाले उनीहरूले विषवमन गरेर लेखे भन्ने आरोप पनि छ ।
पुस २८, २०७५ हिमेश
काठमाडौँ — पृथ्वीनारायण शाहलाई हरेक पक्षमा योग्य देखाइन्छ, उनी राम्रा प्रशासक हुन् । राम्रो योजनाकार हुन् भनिन्छ । यो सबै अतिशयोक्तिपूर्ण छ । उनको निष्पक्ष मूल्यांकन हुनुपर्छ, जुन अहिलेसम्म भएको छैन ।
नेपाली इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाह सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पात्र हुन्, यसमा कहिल्यै दुईमत भएन् । दुईमत उनको काममा भने छ । हिजो पुस २७, पृथ्वी जयन्ती । केहीले यसलाई एकता दिवसको रूपमा मनाए । उनले नेपालको एकीकरण नै गरेका होइनन, केको एकता दिवस भन्ने पनि उत्तिकै छन् । धेरै लामो समय पृथ्वीनारायण शाहलाई खालि राम्रै राम्रो गुण भएको राजाका रूपमा इतिहासमा पढाइयो । र, भनियो, उनले नेपालको एकीकरण गरे ।
बीचमा केहीले फरकमत पनि राखे । पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेका होइनन्, बरु गोर्खा राज्यको विस्तार मात्र गरेका हुन् । यहाँनिर एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न थपिन्छ, उनले यो काम नगरेको भए, अहिलेको आधुनिक नेपाल रहने थियो अथवा थिएन त ? यी सबै यस्ता प्रश्न हुन्, जसको उत्तर नेपाली इतिहासमा अहिलेसम्म पनि प्रस्ट लेखिएको छैन । पृथ्वीनारायण शाहको कालखण्ड बितेको यति धेरै समय भइसकेको छ, अझ पनि उनका बारे प्रश्नहरू ज्यूँको त्यूँ छन् ।
नेपालमा वैज्ञानिक ढंगले इतिहास लेख्न सुरु भएयताका दुई प्रमुख इतिहासकार हुन्, तुलसीराम वैद्य र त्रिरत्न मानन्धर । नेपालको इतिहासमा जत्तिले पछिल्लो समय कलम चलाउने प्रयास गरे, ती सबैका गुरु हुन्, उनीहरू । वैद्य त मानन्धरका पनि गुरु भए । दुवैले लामो समय सँगसँगै काम पनि गरे । उनीहरू नेपालको इतिहासबारे आधिकारिक रूपमा बोल्न सक्नेमा पर्छन् । उनीहरू दुवैले पृथ्वीनाराया.शाहबारे कमल चलाएका छन्, बोलेका छन् ।
त्यसमा पनि समानता भने छैन । वैद्यले लेखेका छन्, ‘पृथ्वीनारायण शाहले सुरुमा नेपाल राज्य बनाउँछु भनेर आफ्नो काम सुरु गरेका होइनन् । यो गोर्खा राज्यको विस्तार नै हो । तर, महत्त्वपूर्ण तथ्य के हो भने गोर्खा राज्य विस्तारकै क्रममा नजानेर नै पछि नेपाल बन्न गयो । उनले नेपाल राज्य स्थापना गर्न गोर्खा राज्यको विस्तार गरेका थिएनन् ।’ वैद्यको पीएचडी पनि पृथ्वीनारायण शाहबारे नै हो, भारतको इलाहाबाद विश्वविद्यालयबाट ।
उनको थेसिसको निचोड नै त्यही हो, त्यो एकीकरण थिएन, राज्य विस्तार नै हो । यही राज्य विस्तारले कालान्तरमा नेपाल भन्ने देश बन्यो । पृथ्वीनारायण शाहले कहीं कतै नेपाल एकीकरण गर्छु, सानासाना छरिएर रहेका राज्यलाई एक गरेर नेपाल बनाउँछु भनेकै छैनन् । उनको दिव्य उपदेशमा पनि एकीकरण शब्द कतै उल्लेख छैन् । हुन पनि पृथ्वीनारायण शाहले सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक पक्षमा धेरै बोले तर उनले नेपाल एकीकरण गर्न यस्तो काम गरें भनेर कहीं बोलेका छैनन् ।
दिव्य उपदेशमा बोलेको भए, त्यो प्रमाण हुन सक्थ्यो । वैद्यको मत हो, ‘यो वास्तवमै गोर्खा राज्यको विस्तार हो, यही विस्तारकै क्रममा नसोचेको किसिमले पछि गएर नेपाल हुन गयो । राज्य विस्तारकै क्रममा गोर्खालीकरण हुँदै गयो । उनले कहीं पनि म नेपाली हुँ भनेका छैनन् । राज्यको नाम गोर्खा रह्यो । जनता गोर्खाली । राष्ट्रिय गीतमै हामी सारा गोर्खाली भनिएको छ । भाषा गोर्खा । तक्माको नाम गोर्खा दक्षिणबाहु । सरकारले निकालेको पत्रिका गोर्खापत्र ।’
इतिहासका विद्यार्थीले बुझ्नैपर्ने के पनि हो भने नेपालको पुरानो राष्ट्रिय गीतमा ‘सारा गोर्खाली’ को स्थानमा ‘सारा नेपाली’ लेख्न लगाउने काम गरेका हुन्, जुद्धशमशेरले । गोर्खाका स्थानमा नेपाल राज्य लेखिन थालेको जुद्धशमशेरकै पालामा हो । केही इतिहासकारले पृथ्वीनारायण शाहबारे मसला थपेर लेखे । उनले यस्तो गरे, उस्तो गरे भने । यो साहित्य बढी थियो, इतिहास कम थियो । पृथ्वीनारायण शाहलाई देवत्वकरण गरियो र यसले नै इतिहास लेख्दा तथा बुझ्दा समस्या हुन्छ ।
‘तर पनि नेपाली इतिहासले पाएका अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूला व्यक्तित्व पृथ्वीनारायण शाहनै हुन् । नेपाल राज्य स्थापनाका लागि दिएको योगदानका आधारमा यो सत्य र वास्तविकता हो,’ वैद्य मान्छन् । यसबारे मानन्धरको के मत छ त ? यो केही फरक छ । उनको भनाइ हो, ‘पृथ्वीनारायण शाहले सुरुमा गोर्खा राज्यको विस्तार गरेकै हुन् । उनलाई त्यति बेला नेपालको एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनेकै थिएन् । खालिआफ्नो गोर्खा राज्य विस्तार गरे ।’
गोर्खाको पश्चिमतिर शक्तिशाली र ठूल्ठूला चौबीसे राज्य थिए । त्यसैले उनी त्यसतर्फ बढ्न नै सकेनन् । यो सम्भवजस्तो पनि थिएन । त्यसैले सुरुमा पृथ्वीनारायण शाह पूर्वतिर बढे । सुरुमा उनको इच्छा भनेको काठमाडौं उपत्यकाका तीन राज्य जित्नु नै थियो । त्यो अर्थमा सुरुमा उनले जे जति गरे, त्यो गोर्खाको विस्तारभन्दा केही थिएन् । ‘ती तीन राज्य जितिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहलाई के लाग्यो भने यसको सुरक्षाका लागि बाँकी अरू राज्य जित्न आवश्यक छ,’ मानन्धरको मत छ ।
नत्र आफूले जितेका ती तीन राज्य कान्तिपुर, ललितपुर र भक्तपुरको भविष्य दिगो हुन सक्ने स्थिति थिएन । त्यसैले पूर्व मात्र होइन, पश्चिमतिर पनि आफ्नो राज्य विस्तार गर्ने काम गरे । पृथ्वीनारायण शाहले सबै काम पूरा गर्न भने सकेनन्, उनको चाँडै निधन भयो । पछि यो काम उनका बुहारी राजेन्द्रलक्ष्मी र बहादुर शाहले पूरा गरे । ‘यसरी गोर्खाको राज्य विस्तारपछि नेपाल एकीकरणमा परिणत भयो, पृथ्वीनारायण शाहले सुरुमै एकीकरण गर्ने सोच बनाएका थिएनन,’ मानन्धरको तर्क छ ।
उनको विश्लेषणमा काठमाडौंमा तीन राज्य जितिसकेपछि नेपाल एकीकरणको भावना पृथ्वीनारायण शाहमा आएको हो । ‘उनले के सोचे भने अब काठमाडौंका तीन राज्य जितिसकेपछि यसलाई स्थायित्व दिनका लागि सानासाना राज्यहरूलाई पनि जितेर एकीकरण गर्नु जरुरी छ । उनको खास मनोकामना ती तीन राज्य जित्नु नै थियो । त्यो पूरा भएपछि उनी चुप लागेर बसेनन् । पछि उनको यही यही इच्छा बुहारी र छोराले पनि बुझेको हुनुपर्छ ।’
मानन्धरले पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारलाई तीन चरणमा विभाजन गरेका छन् । पहिलो, यसको आधार तयार पारे । यो पृथ्वीनारायण शाहकै पालामै तयार भयो र यो गोर्खा राज्य विस्तारका रूपमा थियो । त्यसपछिको दोस्रो चरणमा राजेन्द्रलक्ष्मी र बहादुर शाहले काम गरे । उनीहरूको नेतृत्वमा पूर्व र पश्चिमका राज्य पनि जिते र सही अर्थमा यो नै नेपालको एकीकरण यही हो । यही चरणमा सानासाना राज्यलाई एक स्थानमा ल्याउने प्रयास भयो ।
भीमसेन थापाको पालामा तेस्रो चरण पूरा भयो र यो ‘क्लाइमेक्स’ थियो । राज्य विस्तार हुँदै कुमाउँ र गढवालसम्म पुग्यो । यी स्थान कुनै पनि समय नेपालको भाग नै थिएन । यी स्थानबाट पनि अझ अगाडि बढ्ने प्रयास भयो र यो बढी महत्त्वाकांक्षा नै थियो । आखिरमा त्यही कारणले अंग्रेजसँग युद्ध भयो र त्यसमा पराजित भएपछि नेपालले आफ्नो एक तिहाइ भूभाग गुमाउनुपर्‍यो । ‘त्यसैले मेरो निचोड सुरुमा राज्य विस्तारले पछि एकीकरणको रूप लियो, स्थायित्व, संरक्षण र सुरक्षाका लागि,’ मानन्धरले थपे ।
‘पृथ्वी जयन्तीको बेला हामीले बुझ्नैपर्ने के हो भने केहीले पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार मात्र गरेको हो भन्छन् । केहीले सुरुदेखि नै एकीकरण गरेको हो भन्छन् । दुवै ठीक होइन । ठीक के हो भने गोर्खा राज्यको विस्तारका रूपमा सुरु भएको अभियान एकीकरणमा गएर टुंगियो,’ मानन्धरले भने, ‘यसै क्रममा पृथ्वीनारायण शाहका धेरै कमजोरी पनि देखिन्छन् । तर, यी कमजोरीलाई औंल्याउने काम भने हुन्न । समस्या यहींनिर हो ।’
मानन्धरले भनेजस्तै यही कमजोरी लुकाउने क्रममा राज्य विस्तार र एकीकरण के हो भनेर तर्क–वितर्कले बढी स्थान पाएको हो । ‘मैले पृथ्वीनारायण शाहका कमजोरीलाई दुई भागमा विभाजन गरेको छु । एउटा उनका अमानवीय कार्य, अर्को निन्दनीय कार्य,’ मानन्धरले भने । पहिले अमानीय कार्य । पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट जितिसकेपछि जयन्त रानालाई जुन अन्याय गरे, त्यो वास्तवमै आलोचनायोग्य छ । जयन्त राणालाई छाला काढेर मारिएको थियो ।
पृथ्वीनारायण शाहले जयन्त राणाप्रति के गरे, त्यो ठीक थिएन । दरबारिया षड्यन्त्रकै कारण उनले गोर्खा छाडेर कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लसँग मिल्नुपरेको थियो । अर्को, कीर्तिपुरवासीको नाक काट्नु । यसमा पनि केहीले यस्तो केही पनि भएको थिएन भन्छन् । तर, काटिएको त प्रमाण नै छ, अब । केहीले दुई चार जनाको मात्र माटिएको थियो पनि भन्छन् । प्राप्त नयाँ तथ्यअनुसार नाक काटिएकालाई दुई–दुई रोपनी दरले जग्गा दिइएको थियो ।
त्यस हिसाबले हजार रापेनी जग्गा दिनुपरेको थियो । यस्तोमा धेरैको नाक माटिएकै थियो, कम्तीमा पाँच सय जनाको । पृथ्वीनारायण शाहको पालामा बाहुनहरूले जे जस्तै अपराध गरे पनि ज्यान सजाय दिइन्न थियो । तर, उनले आफ्ना छोरा प्रतापसिंहलाई समाउन खोज्ने वेदकोटका जैसी बाहुनहरूलाई मृत्युदण्ड दिएका छन् । ती बाहुनले जयप्रकाश मल्लसँग मिलेर यो काम गरेको भनिन्छ । उनीहरू यसमा सफल भएनन् । यसक्रममा आठ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।
केहीले मृत्युदण्ड दिनुअगाडि तिनीहरूलाई जातिच्युत गरिएको थियो भन्ने तर्क पनि दिन्छन् । वंशावलीले यस्तो भन्दैन । मृत्युदण्डपछि मात्र ती जैसी बाहुनका परिवारले आफ्नो पुर्खौली कामबाट रोकिएको थियो । कान्तिपुर जितिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले ललितपुरलाई आत्मसमर्पणको प्रस्ताव राखेको थियो र आफ्नो प्रस्ताव माने, सुरक्षाको निश्चितता दिने पनि बनाएका थिए । त्यसैले त्यहाँ छ प्रधानले विश्वासमा आत्मसमपर्ण गरे र ललितपुर बिनाकुनै युद्ध पृथ्वीनारायण शाहको कब्जामा आयो ।
तर, उनी आफ्नो भनाइमा अडिग रहेनन् र पाँच प्रधानलाई उनको परिवारसहित मारिएको छ, एक प्रधान भने भाग्न सफल रहे । अब मानन्धरकै भाषामा निन्दनीय कार्य । पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुर जित्नै नसकेपछि त्यहाँ जाने पानी नै रोकिदिए । नालापानी युद्धमा अंग्रेजले पानी रोक्दा हामी उनीहरूलाई चर्को गाली गर्छौं तर यस्तै काम कीर्तिपुरविरुद्ध पृथ्वीनारायण शाहले गर्दा किन गाली गर्न चुक्छौं त ? त्यस्तै, कान्तिपुरपछि उनले भक्तपुर जिते ।
त्यसका लागि भएको युद्धमा दुई हजार मानिस मारिए । पाँच सय घर जलाइएको थियो । युद्धमा मानिसको मृत्यु हुनु स्वाभाविक थियो, तर जति घर जलाइए, ती सर्वसाधारण जनताका थिए । पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौंमाथि पनि वर्षौं नाकाबन्दी लगाए । त्यही बेला एक माना नुनको दुई रुपैयाँ पुगेको थियो । एक धार्नी कपासको छ रुपैयाँ पुगेको थियो । यो त जनतालाई दु:ख दिने काम भयो । युद्ध भनेको सत्ता पक्षसँग हुन्छ, जनताविरुद्ध हुन्न ।
अर्को तथ्य भने भर्खरै मात्र बाहिर आएको छ र यसको श्रेय महेशराज पन्तलाई जान्छ । उनका अनुसार काठमाडौंका देउभाजुहरूआफ्नो पक्षमा नआएपछि उनीहरूको सारा सम्पत्ति लुटेका थिए । देउभाजु भनेका राजोपाध्याय हुन् । उनीहरूको धार्मिक क्रियाकलापमा ठूलो भूमिका हुन्छ । इन्द्रजात्राका बेला पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुरमा आक्रमण गर्दा ती राजोपाध्यायहरू उनको समर्थन नगरेपछि ग्वाछेम्व गल्लीमा उनीहरूको सबै सम्पत्ति लुटिएको थियो ।
‘पृथ्वीनारायण शाहलाई हरेक पक्षमा योग्य देखाइन्छ, उनी राम्रा प्रशासक हुन् । राम्रो योजनाकार हुन् भनिन्छ । यो सबै अतिशयोक्तिपूर्ण छ,’ मानन्धरको भनाइ हो, ‘उनको निष्पक्ष मूल्यांकन हुनुपर्छ, जुन अहिलेसम्म भएको छैन । भ्युज अफ हिन्दुस्तान भन्ने किताबमा नेपालबारे दुई पाना लेखिएको छ । त्यसमा गोर्खाका यी राजालाई जंगली र असभ्य भनिएको छ । उनले राज्य विस्तारका क्रममा घिनलाग्दो काम पनि गरेको दाबी गरिएको छ ।’
केहीले के पनि भन्छन् भने पृथ्वीनारायण शाहले क्रिस्चियन पादरीलाई देश निकाले गरेको हुनाले उनीहरूले विषवमन गरेर लेखे भन्ने आरोप पनि छ । उनीबारे लेख्न सबै विदेशी पादरी नै थिए भन्ने पनि होइन । पादरी नभएकाले जे देखे र सुने, त्यही लेखे । पृथ्वीनारायणबारे राम्रो लेख्दा उनका नराम्रा पक्ष पनि लुकाउनुभएन । उनका अरू पनि धेरै कमजोरी छन्, जसको खास चर्चा हुन्न । पृथ्वी जयन्तीका बेला यसबारे किन बहस हुन्न त ?
राज्य विस्तारकै कारण नेपाल
राणा शासनको अन्त्य अन्त्यतिर सूर्यविक्रम ज्ञवालीले पहिलो पल्ट पृथ्वीनारायण शाहबारे लेखे । त्यसको लेख दार्जिलिङमा भएको थियो । त्यसअगाडि उनीबारे खासै लेखिएको नै थिएन । त्यो पुस्तक नेपालमा लगभग प्रतिबन्धकै स्थितिमा रह्यो । राणाहरूले त्यसको ‘काउन्टर’ मा रामकृष्ण कुँवरबारे लेख्न लगाए । यी रामकृष्ण जंगबहादुरका पुर्खा हुन् । त्यो किताब लेखाउनुपछाडि राणा पनि शाहभन्दा केही कम छैनन् भनेर देखाउनु नै मात्र थियो ।
यो किताबको खुबै प्रचारप्रसार गरियो । सात सालपछि पृथ्वीनारायण शाहबारे अरू धेरै पुस्तक पनि आए । धेरैले त्यसक्रममा पृथ्वीनारायण शाहको बढी प्रशंसा गरेर लेख्न सुरु भयो । त्यसको धेरैपछि यी प्रशंसाको चर्को आलोचना पनि भयो । ‘पृथ्वीनारायण शाहबारे दुवै पक्षमा अतिवादी हुनु हुन्न,’ मानन्धरको निचोड हो, ‘केहीले उनलाई साम्राज्यवादी तानाशाही भन्छन्, त्यो पनि ठीक होइन । केहीले सुरुदेखि उनको एकीकरण गर्ने योजना थियो भन्छन्, त्यो पनि होइन ।’
पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको काममा क्रममा धेरै यस्ता काम पनि भएका छन्, जसलाई अहिलेको सभ्य समाजले त्यसलाई स्विकार्न सक्दैन । अब अन्त्यमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उही प्रश्न, पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो राज्य विस्तार नगरेको भए अहिले के नेपाल रहन्थ्यो त ? यसबारे स्पष्ट जवाफ कोहीसँग हुने छैन, किनभने इतिहासले अनुमान गर्दैन । तर यति भने पक्का हो, पृथ्वीनारायण शाहले राज्यविस्तार गरेकै कारण अहिलेको समृद्ध नेपाल भने रहेको हो, यो पनि उत्तिकै सत्यतथ्य हो ।
अनि सत्य के पनि हो भने इतिहास प्रत्येक पुस्तामा दोहराएर लेखिन्छ । यो इतिहासको सिद्धान्तजस्तै हो । एउटा पुस्ताले पृथ्वीनारायण शाहबारे जे लेखे, त्यो अर्को पुस्ताले नदेख्न पनि सक्छ । त्यस्तै समान अनुभव नगर्न पनि सक्छ । पृथ्वीनारायण शाहबारे धेरैले लेखिएका छन् होला, तर, अझै लेखिन बाँकी छ । उनीबारे लेखिने क्रम टुंगिने छैन । त्यसैले नै, वैद्यले भने जस्तै, नयाँ पुस्ताले आफ्नो समयअनुसार पृथ्वीनारायणबारे अझै लेख्नुपर्छ, बहस जारी राख्नुपर्छ ।
प्रकाशित : पुस २८, २०७५ ०८:२४